Fekitori Mufananidzo - Hebei Veyong yemishonga Co., Ltd.
Hebei Veyong Pharmaceutical Co, Ltd.i hombe chipfuyo mishonga yezvipfuyo inosanganisa iyo R&D, kugadzirwa uye kutengesa kwevezvipfuyo APIs, gadziriro, maficha ekumberi uye zvekuwedzera zvekudya, zvinopihwa seHigh-Tech Enterprise, Wepamusoro 10 weVeterinary APIs Enterprise.
Iine mabheseni maviri ekugadzira: Shijiazhuang uye Ordos, uye 7 API mitsara yekugadzira, gumi nemaviri ekugadzira mitsara inosanganisira hupfu, pulvis, premix, bolus, majekiseni, mishonga yekuuraya zvipuka uye mishonga inouraya utachiona, ects, uye 2 sanitary disinfectant yekugadzira mitsara yezvinwiwa uye neupfu. Veyong anoteera zano rekuvandudza re "Kubatanidzwa kweAPI & gadziriro", inotora "Chengetedza hutano hwemhuka uye nekuvandudza hupenyu hwehupenyu" senhume, uye inovavarira kuve inonyanya kukosha mishonga yezvipfuyo.
Veyong inoomerera pakumisikidzwa kwe "Nyowani-yemhando yepamusoro yehutano hwemhuka mupi", kuvimba nematanho mashanu makuru ekutsigira masisitimu: yenyika postdoctoral workstation yevaridzi veboka, Nanjing GLP murabhoritari, National technical Center yeChemical Synthesis muShijiazhuang, Provincial technical Center ye Veterinary Zvinodhaka muShijiazhuang uye Autonomous Dunhu R&D Center muOrdos. Kutora zvakanakira matarenda uye zvinhu, Veyong akatanga hukama pamwe neanopfuura makumi maviri anozivikanwa nyanzvi kubva kudzimba dzekutsvagisa kwesainzi uye akagadzirira kumisikidzwa kwehunyanzvi hwebasa mapuratifomu. Kuomerera kunzira yekuvandudza ye "kusanganisa yakazvimirira R&D, mushandirapamwe kuvandudza uye tekinoroji sumo" inoramba ichigadzira zvigadzirwa zvitsva uye kusimudzira zvigadzirwa zvekare kuti zvipe vatengi ruzivo rwakanyanya rwemushonga zviitiko.uye kumisikidzwa kwakateerana kwemunyika mitsva mishonga yezvipfuyo kuchapa simba rekuenderera kukurudzira kwekugadzirwa kwechigadzirwa, kukwidziridzwa uye kuvimbiswa kwemhando yepamusoro.